Kweqe iziboshwa eziyingozi oLundi | News24
Kweqe iziboshwa eziyingozi oLundi
Durban - Kweqe iziboshwa eziyingozi ezintathu esitokisini sesiteshi samaphoyisa asoLundu ngoMsombuluko ebusuku.
Lezi ziboshwa bezivele eNkantolo yeMantshi yasoLundi enyakatho neKZN kanti besezizohanjiswa ejele laseNcome eVryheid.
Lezi ziboshwa zibhekene namacala okubulala, ukudlwengula nokugqekeza.
OLUNYE UDABA: kweqe iziboshwa eziyisithupha esitokisini eGoli
Okhulumela amphoyisa asoLundi uCaptain Ntombi Gwala ngoLwesithathu utshele iDaily Sun ukuthi uXolani Biyela, 25 noBongani Buthelezi, 25, basoLundi noThokozani Mbatha, 26, waseKombe bebegcinwe esitokisini ejele laseNcome kusukela ngonyaka ophelile.
"Laba bobathathu bafika esiteshini ngoMsombuluko ekuseni bahanjiswa ngokuhlukana enkantolo base bebuyiselwa esitokisini ngemuva kwesikhathi ukuze bezohanjswa ejele. Yize kunjalo ngemuva kwamahora amabili befikile esitokisini basika uphahla ngesahha beqa," usho njalo.